तोदेमा भेटिएन ठूलो विमार: डा. भोटियाले भने, प्रकृतिलाई प्रेम गरे, प्रकृतिले पनि प्रेम गर्छ - खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङतोदेमा भेटिएन ठूलो विमार: डा. भोटियाले भने, प्रकृतिलाई प्रेम गरे, प्रकृतिले पनि प्रेम गर्छ
September 25, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ, खबर 0
कालेबुङ, 25 सितम्बर: कालेबुङ जिल्लाको सबैभन्दा टाडामा अवस्थित तोदेमा भोटिया सांस्कृतिक एवं विकास बोर्डको तोदे-ताङ्ता युवा एकाईँको आयोजनामा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर सम्पन्न भयो। भारत-भूटान सिमावर्ती क्षेत्रसित जोडिएको तोदेमा अवस्थित हिमाली बोर्डिङ इन्सटिट्यूसनमा सम्पन्न शिविरमा करीब5सय मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। उनीहरूलाई डा. पीडी भाटिया लगायत सिलगडीबाट आएका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए।
शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गराउन आउने मानिसहरू भीडका साथ रहेपछि यस क्षेत्रका अधिकांक्ष मानिसहरू स्वास्थ्य भेटिएको डा. पीडी भोटियाले बताए।
‘यस क्षेत्रमा ब्लड सुगर, हाइ ब्लड प्रेसर जस्ता ठूलो विरामीहरू धेरैभन्दा धेरै कम भेट्टायौँ’-बङ्गरत्न पाइसकेका प्रख्यात डा. पीडी भोटियाले भने, ‘यसबाट के बुझिन्छ भने हामीले प्रकृतिलाई प्रेम गरे प्रकृतिले पनि हामीलाई प्रेम गर्छ।’
भोटिया अनुसार शिविरअवधि जेनरल चेकअप, हेपाटाइसिस बी, हेपाटाइसिस सी, इस्क्रिनिङ टेस्ट, ईसीजी, ब्लड सुगर, हाइ ब्लड प्रेसर आदि रोगहरूको जाँच गरियो। तर शिविरअवधि केवल टाउको दुख्ने, हात, खुट्टा दुख्ने, जीउमा खटिरा आउने जस्ता सामान्य रोगीहरू मात्र धेरै थियो। जबकी शहरी क्षेत्रमा शिविरको आयोजना गर्दा अत्याधिक मात्रामा धेरै ठूलो रोगीहरू सङख्या भेटेन्छ। यसैले गाउँ-बस्तीमा सरह प्रकृतिलाई प्रेम गरे प्रकृतिले पनि प्रेम गरेर मानिसहरू स्वास्थ्य हुने डा. भोटियाले बताए।
यस क्षेत्रका मानिसहरूले दाउरा बालेर खाना पकाउने गरेको कारण कार्बन-डाइ अक्साइडको कारण टाउको दुख्ने विरामीहरूको सङख्या धेरै भएको हुनसक्ने डा. भोटियाको अनुमान छ। उनले दाउरा बालेर खाना बनाउन कम गर्ने, सर-सफाईमा ध्यान दिने, चिप्लो खानेकरा काम खाने इत्यादि सल्लाह दिएका छन्।
यसबाहेक यस क्षेत्रमा आँखाका रोगीहरूको सङख्या निक्कै भेटिएका कारण कुनै संस्थाहरूले यस क्षेत्रमा आएर आँखा जाँच शिविर गराइदिन भोटियाले आह्वान गरेका छन्।
शिविरमा भोटिया विकास बोर्डका अध्यक्ष पाल्देन ढेण्डुप भोटिया, उपाध्यक्ष कर्नल दाडुल रिञ्छेन भोटिया आदिको विशेष उपस्थिति थियो। कार्यक्रमबीच विकास बोर्डद्वारा डा. पीडी भोटियालाई सम्मान पनि जनाइएको थियो।